Man United oo ka hor istaagtay Pogba inuu saxaafadda la hadlo – Gool FM
Kooxda Man United oo mushahar sare ku soo jiidanaysa Jadon Sancho… (Immisa ayay u soo bandhigeen?)
“Waxaan jeclaan lahaa inaan xirto Maaliyadda lambarka 7-aad ee Barcelona” – Griezmann
Antonio Cassano oo shaaca ka qaaday sababta uu Messi ka door-biday Maradona
Maxay ahayd sababtii uu Cristiano Ronaldo ku doortay Man United, xilli ay doonayeen kooxo badan oo ay ku jirtay Arsenal?
Messi iyo Ronaldo oo hoggaaminaya safkii ugu qiimaha badnaa sanadkii 2010-kii, xilli Rooney iyo Kaka ay ka soo muuqdeen
Paul Pogba oo ku warramay hadal rajo-geliyay taageerayaasha Kooxda Manchester United
Kooxda Real Madrid oo ku soo biirtay loollanka loogu jiro difaaca loogu doonista badan yahay suuqa kala iibsiga
Mid ka mid ah xiddigii hore ee Premier League oo Liverpool kula dooday inay heshiis cusub ka saxiixaan Virgil Van Dijk
Karim Benzema oo aaminsan in Ronaldo uu ka fiican yahay Zidane… (Maxay tahay sababtu?)
Gianfranco Zola oo sheegay sababta uu Premier League u noqday kan ugu fiican Yurub
Man United oo ka hor istaagtay Pogba inuu saxaafadda la hadlo
Dajiye October 28, 2018
(Manchester) 28 Okt 2018. Wararka ka imaanaya gudaha dalka England ayaa waxay daboolka ka qaadeen in Manchester United ay amar ku bixisay in Paul Pogba uu joojiyo in saxaafada uu kala hadlo xiriirka kala dhexeeya Jose Mourinho iyo mustaqbalkiisa garoonka Old Trafford.
Wararka ayaa waxay intaas kusii darayaan in Pogba uusan ku faraxsaneen mudada 12-kii bilood ee lasoo dhaafay doorka uu ku leeyahay kooxda iyo qaabka uu u la dhaqmo Mourinho.
25 jirkan reer France ayaa wuxuu haatan shaaca ka qaaday in Manchester United ay ka hor istaagtay inuu la hadlo warbaahinta.
“Ma hadli karo, la iima ogola inaan hadlo, waxaan doonayaa inaan sidaas sameeyo, balse la iima ogola, waxay ii sheegeen inaanan hadli karin”.
Pogba ayaa hprey loogu diiday inuu la hadlo saxaafada kadib guuldaradii Valencia kaga soo gaartay Champions League, lakiin kadib waxaa loo ogolaaday inuu la hadlo dhowr shirkadood.
Si kastaba ha ahaatee waxaa markale Pogba lagu amray inuu joojiyo la hadalka warbaahinta, balse waxaan wali kala cadeen in go’aanka uu yahay mid ka yimid Mourinho ama maamulka sare ee kooxda.
Mustaqbalka Pogba ee kooxda Manchester United ayaa sii xumaanaya xiliba xiliga kasii dambeeya, xili ay saxiixiisa ku raad joogaan kooxaha Real Madrid, Barcelona, Juventus iyo Paris Saint-Germain, laakiin laacibka reer France ayay wararku sheegayaan inuu xiiseenayo ka ciyaarista horyaalka La Liga.
LIISKA Xiddigaha xulka Qaranka Soomaaliya ee ka qeyb galaya isreeb-reebka Olombikada Aduunka oo la soo saaray
Taageerayaasha Garoonka Camp Nou oo helaya war wanaagsan ka hor kulanka El-Clasico